Casharrada: Naqshadeynta Calaamadaha Nooca Tim Burton ee AI (1) | Abuurista khadka tooska ah
Ma jeceshahay sharraxaadda Burtoniana? Casharkaan waxaan ku arki doonaa sida loo abuuro sawirro qaabka filim-sameeyahan. Gaar ahaan, qaybtaan koowaad waxaan diiradda saari doonaa qaar ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn wajiga. Tan awgeed waxaan u isticmaali doonaa sawir gacmeed aan ka helay shabakada taageere Tim Burton oo aan ka helay xiiso leh oo aan ka shaqeyn karo, in kastoo aan wax ka bedel ku sameyn doono.
Si aan u bilawno, waxaan aadeynaa Feyl> Cusub oo waxaan doorannaa cabirka sida ugu habboon noogu habboon in aan hadhow u aadno Sawir> Goob. Ka dib waxaan raadin doonnaa sawirka aan ku raadinayno baafinta (horay ayaan kuugu sheegay waxaan isticmaali doonaa sawir) waxaanan ku dabaqi doonnaa hagaajinta lagama maarmaanka ah si markaa sawirkani u noqdo hage baadi goob ama qaab sawir ah. Si tan loo sameeyo, waxaan aadi doonnaa qaybta lakabyada iyo waxaan laba jibaareynaa lakabka sawirka aan hada dhignay. Daaqad pop-up ah ayaa ka soo muuqan doonta taas oo aan ku qasban nahay dhaqaajiso sanduuqa "Template" (xilligaas mugdiga sawirkeennu wuxuu si otomaatig ah u noqonayaa 50%). Micnaha sawirkayagu yeelanayo ayaa ah inuu noogu adeego hage ahaan. Waxaan u baahannahay inaan aragno khadadka, qaababka si loo raad raaco oo aan uga shaqeyno si dhakhso leh, hufan oo nadiif ah.
Waxa xiga ee aan sameyn doonno waa inaan aadno qalabka qalinka oo leh midab buluug ah oo buluug ah sida aan u jecelahay ayaan bilaabi doonnaa raad raaci hal muuqaal oo ah dabeecadeena wejigeeda. Xaaladdan oo kale, farsamadan baadi goobku si aad ah ayey noogu shaqeysaa iyada oo ay ugu wacan tahay fudeydka qaabka wejiga aan raadineyno, laakiin waxay kuxirantahay sheyga aan ka shaqeyneyno, waxaan u adeegsan karnaa qaabab kale oo kala duwan. Waxay sidoo kale noqon laheyd mid aad waxtar u leh in la joojiyo midabka buuxinta ee ku jira qalabka qalinka isla markaana la kiciyo kaliya istaroogga, sidan ayaan kaliya ku arki doonnaa khadka oo waxaan ku sameyn doonaa si sax ah Intaas ka dib waan awoodnaa sifeeyay qaab-dhismeedkiisa oo sifiican u siman geesaheeda haddii loo baahdo la shaqeynta tilmaamaha cad ee qodobada barroosinka.
Marka tan la sameeyo, waxaan aadi doonnaa Qalabka muraayadda in aan sidoo kale u isticmaali karno adigoo riixaya Furaha iyo kaas oo ku jira isla badhanka sida qalabka wareejinta. Waxaan laba jibaareynaa qalabkan isla markaana markii uu furmo daaqad soobaxda waa inaan dooranaa ikhtiyaarka naga dhigaya milicsiga qaadashada dhidibka taagan. Waa muhiim inaan gujino ikhtiyaarka nuqul, ma ahan Ok, laakiin waa nuqul. Mar alla markii aan riixno nuqul, waxaan jiidi doonnaa cunsurkan cusub ee aan hadda ku abuurnay tilmaamaha madow oo aan ugu soo biiri doonno dhinaca kan kale qaab isku dheelitiran, iyadoo laga taxadarayo in aanaan ka tagin farqiga u dhexeeya labada walxood, waxaan ku riixnaa labada lakab oo riixnaa Wareejinta + Ctrl + J, Waqtigan xaadirka ah waxaa jiray midow labadaas qayboodna waa qayb kamida gabal.
Waxaan horey u leenahay maqaarka wajiga. Waxaan u tagi doonaa indhaha, iyadoo qalabka xusulka Waxaan ku abuuri doonnaa mid kasta oo ka mid ah dabeecadaha indhaheena. Mar alla markii aan sameyno xusullada, waxaan wax ka beddeli doonnaa qodobbada barrooskooda haddii loo baahdo. Marka tan la dhammeeyo waxaan aadi doonnaa tabka gradientska oo waxaan dooran doonnaa a radial gradient taasi waxay ka baxdaa hal midab caddaan saafi ah midab huruud ah. Waxa aan raadineyno waa saameyn mug leh sidaa darteed waxaan raadineynaa bedello ku habboon ujeedkeenna.
Marka tan la dhammeeyo, waxaan dib ugu laaban doonnaa qalabka ellipse. Waxaan abuuri doonnaa iriska iyo ardayga isla gabalkii. Si tan loo sameeyo waxaan abuuri doonaa ellipse iyo gudaheeda cusub xariiq toosan iyo toosan. Waxay ka koobnaan doontaa laba darafyo midab buluug mugdi ah iyo gudaha buluug aad uga fudud.
Waxa xiga ee aan sameyn doonno waa adeegsiga qalabka Burush Smudge. Waxaan bilaabi doonnaa abuuritaanka dulucda ishaas iyo jeedal jeedda. Marka khadadka la sameeyo, waxaan ku beddeli karnaa gacanta si aan u siino qaab aad u wareegsan oo jilicsan iyada oo loo marayo dhaqdhaqaaqa dhibcaha barroosinka. Waxaan markaa ka shaqeyn doonnaa dusha isha iyo mid kasta oo baarkooda. Markaa waxaan ku abuuri doonnaa wejiga turquoise sharoobadaas. Wejigani wuxuu ka koobnaan doonaa midab turquoise ah, oo leh darafyadiisa oo ay xukumayaan midab madow iyo aagga dhexe oo ay ku badan tahay dhawaaqa fudud.
Waxa soo socdaa waxay noqon doontaa in la abuuro hooska isha. Tan awgeed waxaan aadeynaa baalal oo waxaan abuuri doonnaa qaab u eg kan aad arkayso. Waxaan raaci doonaa hooska ka muuqda sawirka laftiisa. Qaabkan waxaan udhigi doonnaa isha gadaasheeda ka dibna abuura a duleeyey markale. Waxay noqon doontaa nooc qumman oo toosan. Wehliyahayagu wuxuu yeelan doonaa midabbo u eg kuwa shaashadda ka muuqda. Tag laga bilaabo hooska buluug khafiifka ah illaa hooska cad, marka lagu daro ah qaabka isku qasida ayaa noqon doona Isku dhufasho si loo waafajiyo loona dhexgalo maqaarka wajiga.
Waxa soo socdaa waxay noqon doontaa in la xoojiyo muggaas iyo mugga isha. Waxaan u abuuri doonnaa dhalaal labada shuruud iyo arday iyo iris. Waxaan kula abuuri doonaa buraashka qaabab qaar ka mid ah kuwan soo socda, laba isha indhaha ah iyo mid ka mid ah iriska. Markaan dejino, beddelno oo aan dhigno qaababkan Waxaan ka abuureynaa wejigooda dhexdooda mid toosan oo toosan. Wehliyahaas wuxuu ka socon doonaa midab cad illaa midab madow, marka lagu daro istaroogyadaas waxaan ku dabaqi doonnaa a qaabka isku dhafka raster tani waxay si fudud ula qabsan doontaa dusha hoose.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » muujiye » Casharbarka: Naqshadeynta Calaamadaha Tim Burton ee AI (1)